OMANY NY FONAO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 décembre 13, 2013 Laisser un commentaire sur OMANY NY FONAO
« …Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany » (Marka 1:3)
Eto am-panombohana dia tsara ny manamarika fa tenin’Andriamanitra efa voasoratra ao amin’ny Isaia 40:3 izao averin’i Marka soratana eto izao. Izao anefa! Nosoratany izany mba hanehoany ny maha izy azy an’ny Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana ihany; manomana ny fihavian’i Jesosy Kristy. Eto dia tsikaritra avy hatrany ao anatin’ny an-dalan-tsoratra masina ireo fiomanana tokony atao ny amin’ny andraisana ilay Andriamanitra be voninahitra ho tonga eto amintsika; tahaka ny hoe: « amboary » sy ny hoe: « ataovy mahitsy ».
Amin’izao tenin’Andriamanitra izao dia miara-mandre ny feo avy any an’efitra isika fa tokony hamboarina ho mahitsy izay lalana andehanan’i Jehovah. Feon’iza anefa ilay miantso ary nahoana angaha no any an’efitra no iantefan’izany? Andriamanitra mihintsy no miantso antsika ary tsarovy fa miasa am-pahanginana sy am-pilaminana Izy. Tsy misehoseho ny fanjakan’Andriamanitra araka ny Lioka 17:20b « Tsy misehoseho ny fihavin’ny fanjakan’Andriamanitra ». Te hampianatra fahatoniana ho antsika Izy eo amin’ny fihainoana izay ambarany amintsika. Toy ny fahanginana any an’efitra raha adika tsotra. Ny dikan’izany ihany koa dia izao: Tandremo ny feo renesinao sao dia feo mamitaka. Henoy amin’ny fo sy saina tony ary mailo izany. Mangataha amin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra hamantaranao ny tena marina. Tsarovy ny tenin’Andriamanitra milaza amintsika fa hisy koa fisandohana ny amin’ny fihavian’ny Kristy. Hitantsika izany araka ny voasoratra ao amin’ny Matio 24:24 hoe: « Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny. »
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo; efa akaiky izao ny Krismasy, fotoana iray ahatsiarovantsika ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Iza no efa mba miomana ny amin’izany? Ny tendrombohitry ny avonavona ao anatinao; tian’Andriamanitra haetry izany, esorina mba tsy hamaka lalina aminao. Ny lohasahan’ny tsy marina mitampisaka ao am-ponao; tian’Andriamanitra asandratra izany mba hitoetra sy hijoro tsara amin’ny fahamarinana. Ho avy ao am-ponao amin’ny alalan’ny fahaterahan’i Jesosy Kristy Zanany Izy. Efa mandona eo am-baravaran’ny fonao Izy ka te honina ao aminao. Tsarovy ry havako fa ny fahaterahan’i Jesosy ao am-ponao dia midika fa mitsimoka indray ao anatinao ny Fifaliana sy ny Fiadanana ary ny Fahasambarana efa nomeny ho anao hatrizay. Na dia saika ho maty momoka aza izany teo aloha, minoa an’i Jesosy Kristy ianao fa velona izany manomboka eto. Mahereza! Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.
Publié parfilazantsaramada décembre 13, 2013 Publié dansUncategorized